Usuku LwaseNtshonalanga ka-2015: unyaka luni, lapho luqala, izimpawu, kanye nezici zomkhosi.
Unyaka omusha waseShayina iholidi yendabuko, ebaluleke kakhulu eChina nakwamanye amazwe ase-East Asia. Ihlobene eduze nenyanga entsha yasebusika, eyenzeka emva kwe-solstice yasebusika. Yingakho ungathola igama lomkhosi, njengoNyaka Omusha WamaLunar.
Ngonyaka we-Chinese New Year 2015 ufika
Esimisweni sekhalenda samaRussia, leli holide lifika ngolunye lwezinsuku phakathi kukaJanuwari 21 noFebruwari 21. Ngokusekelwe ezinyathelweni zenyanga, usuku oluqondile luyonqunywe, uMnyaka Omusha WaseChina uzogubha ngobusuku obungu-18 kuya ku-19 Febhuwari.
Kulobubusuku wonke imigwaqo yaseChina izogcwala imihlobiso ekhanyayo, futhi abantu bayojabulela iholidi elijabulisayo.
Ngokuvamile ngosuku lokuqala loNyaka Omusha, abantu baseShayina baqala iziqhumane futhi bashise izibusiso ngenani elikhulu kakhulu. AmaShayina akholelwa ukuthi iziqhumane ezinkulu nezikhanyayo zizobasiza ukuba babesabe imimoya emibi futhi badonse umoya wenjabulo nokuthula emndenini. Kukholelwa ukuthi ekupheleni kosuku, amalungu omndeni adinga ukubingelela onkulunkulu ababuyela ekhaya ngemuva kokuvakashela ezweni lemimoya.
Ngosuku lokuqala ngesikhathi sokudla komndeni, bonke banambitheka ngokuphathwa kwendabuko. Futhi emva kwalo umlilo uqalisiwe. Ngakusasa ekuseni, izingane kufanele zihalalisele unina noyise, futhi abazali nabo banikeze imali, bapakwe ezimvilophini ezibomvu. Umkhosi uphela ngosuku lwama-15, bese kuqhutshwa uMkhosi weLangtern.
2015 - unyaka wakhe ekhalendeni
AmaShayina amhlonipha kakhulu amasiko abo, abakhohlwa izinkolelo zokhokho bawo futhi ahlonipha izinkolelo zasendulo. Kuyinto evamile ukuba laba bantu banikeze uphawu olufanekisela unyaka ozayo. Ukuze wenze lokhu, sebenzisa esinye sezilwane ezingu-12, kanye nombala othize, onobungane nezici ezinhlanu. Isilwane nombala wayo kubaluleke kakhulu kulo mkhosi wonke.
Ukuze uthole ukuthi ubani ozayo ngonyaka ka-2015, yisiphi isilwane okufanele sifanekise, sidinga ukuvula ikhalenda lesiShayina. Unyaka ozayo uzobanjelwa ngaphansi kophawu lwezimvu noma imbuzi, futhi into esemqoka iyoba isihlahla, enemibala - eluhlaza okwesibhakabhaka noma eluhlaza.
Izimpawu ezihlobene nezimvu eziluhlaza okwesibhakabhaka (imbuzi)
Ngemuva kokuthola ukuthi unyaka ka-2015 u-horoscope, uzothola kuyithakazelisayo ukufunda mayelana nezici ezihambisana nezimpawu zayo.
Isibonelo, abantu abaningi bakholelwa ukuthi unyaka wezimvu ungaletha isimo sengqondo esishintshayo, ngoba lesi silwane sivame ukubonakaliswa ngumlingisi obala kakhulu kanye nokuguquka kwemizwa esheshayo.
Ngaphezu kwalokho, imbuzi iqaphele, ngakho ngonyaka ozayo akukhuthazwa ukwenza izinguquko ezinamandla empilweni, i-ray ukuze ibambe ngokuthula.
Ngaphezu kwalokho, umbala oyinhloko ngonyaka kaGoat 2015 uzobe ubuluhlaza, kusho ukuthula nokuthula.
Uma ukholwa ngezibonakaliso nangenxa yezinto ezithile, ungase ufike nesigqoko sokugubha uNyaka Omusha ka-2015 kubo bonke abalingiswa kanye nezici zabo. Kulesi simo, akunconywa ukugqoka izingubo ezimhlophe ukuze kusihlwa, ukuze ungesabi inhlanhla. Kodwa inzuzo izoya emikhwalweni yemvelo, kanye nokutholakala kwezimhlobiso zokhuni.
Indlela yokuqagela kahle amabalazwe
Isibikezelo sezinkanyezi sezibonakaliso zezinkanyezi zeviki elizayo
Uphawu lomrako omnyama
Ukuhlukaniswa phakathi kwamaholide omnyaka omusha
Air charlotte ene apula ekhaya - zokupheka zakudala futhi ezilula
Indima yokuziphatha ekukhuliseni izingane
Ungamisa kanjani ukubamba izipikili zakho
Isaladi neklabishi namanqamu
I-scarlet lipstick iyisimo esihle sobuhle-2017
Impilo yezocansi yomuntu
Ukunakekelwa kahle kwesikhumba ebusweni nomzimba
Inyama encane embizeni
Ukukwazi nomuntu ongaphandle kwenye indawo yokuphola
Ukuhamba ku-Instagram Ksenia Sobchak ngobaba wakhe kwabangela ingxoxo yezombangazwe
Izakhiwo zokwelashwa nezomlingo wama-amazonite